စက်ဘီးဘဲလ် စက်ဘီးဘဲလ် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ စက်ဘီးဘဲလ်, အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းမှအင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အအသိအမှတ်ပြုသည်အရာ။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတောအတွင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူအသင်းများထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်တို့ထက်သာလွန်ထုတ်ကုန်သေချာထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပစ္စည်း:ထိပ်တန်း-အလွိုင်း,အခြေခံပလပ်စတစ်.အရွယ်အစား:၃၈ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,20 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၁.၄ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:၈ ကီလိုဂရမ် Fancy ဘေ့စ်ဘော-စတိုင်အမြင်-ထူးခြား။ အံ့မခန်းဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်လူတစ် ဦး စီအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်.စက်ဘီးခေါင်းလောင်းအသုံးပြုရန်အဆင့်များ:ဘေ့စ်ဘောရိုက်တံအနေအထားကိုသင်၏လက်မနှင့်နှိပ်ပါ,အပြင်သို့ဆွဲထုတ်ပါ,ပြီးမှလွှတ်လိုက်ပါ. လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ဂန္ထဝင်လူမီနီယံခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတာရှည်ခံ။ လှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်